Nhau - Fractional CO2 Laser Kurapa Vs. Fractional Erbium Laser Kumisazve
Fractional CO2 Laser Kumisazve
Iyo inoshanda sei: Fractional kabhoni dhayokisaidhi (CO2) laser yekumutsiridza michina inoshandisa infrared mwenje inounzwa kuburikidza necarbon dioxide-izere chubhu kuumba microthermal maronda mune yakanangwa matishu. Sezvo mwenje unosvitswa neganda, zvinyama zvinoitwa vaporized, zvichitungamira mukubviswa kwemasero eganda akwegura uye akakuvara kubva kune yekunze chikamu chenzvimbo inorapwa. Thermal kukuvara kunokonzerwa ne laser zvakare zvibvumirano zviripo collagen, iyo inosimbisa ganda uye inosimudzira nyowani collagen kugadzirwa padivi nespike mune ine hutano sero kuvandudzwa.
Pros uye Cons: Kunyange isiri-yekuvhiya, iyi yekurapa modhi inokanganisa kupfuura mamwe akawanda ganda anomutsa marapirwo, ayo anogona kuturikira kune mamwe anoonekwa mhedzisiro. Izvo zviri kutaurwa, chokwadi chekuti chakanyanya kuvhuvhuta zvakare zvinoreva kuti kukwana kana kukwana sedation kunogona kuve kunodikanwa kune murwere nyaradzo uye nguva dzekurapa dzinowanzo pakati pakati pemakumi matanhatu kusvika makumi mapfumbamwe maminetsi. Ganda rinozove rakatsvuka uye kudziya kune iro rinobata, uye inokwana vhiki rimwe rekuzorora rinotarisirwa.
Contraindications: Kune akatiwandei contraindications, senge anoshanda hutachiona munzvimbo yaunoda yekurapa. Mukuwedzera, varwere vakashandisa isotretinoin mumwedzi mitanhatu yapfuura vanofanira kumirira kurapwa. CO2 laser kumutswa zvakare haina kukurudzirwa kune yakasviba ganda mhando.
Fractional Erbium Laser Kumisazve
Iyo inoshanda sei: Erbium, kana YAG, lasers vanoshandisa infrared mwenje kuburitsa inopisa simba mukati mepasi peganda. Fractional erbium laser kumuka inogadzira zvidiki zvidiki zvinokuvadza (dermis), iyo yepakati peganda, collagen inokuvadza uye maseru eganda akura uye zvichikurudzira kugadzirwa kweiyo itsva collagen uye kugadziridzwa kwesero kune hutano. Mune mamwe mazwi, maitiro ekurapa anoita rudzi rweanodzorwa matissor vaporization kurapa nekuporesa ganda rakakuvara kuti riwedzere kugadzirwa kweganda, matauriro, uye kusimba.
Zvayakanakira nezvayakaipira: Fractional erbium laser kurapwa inokodzera zviri nani kuvarwere vakura, nekuti, zvichienzaniswa ne microneedling, ivo vanonongedza matishu ayo akadzika pazasi pechiso chekusimudzira kukwidziridzwa mukugadzirwa kwe collagen. Zvisinei, hapana nhungamiro yakasimba yekuona kuti ndiani angave ari mudiki kune aya marapirwo. Uku kurapwa kunodawo kwakakosha kuzorora uye kutsvuka kunogara kwemazuva akati wandei. Erbium fractional laser kurapwa haina kukodzera kune yakasviba ganda toni nekuda kwengozi huru yekukanganiswa.
Contraindications: Nekuti lasers inopisa ganda, kune yakawanda mhedzisiro mhedzisiro yekutarisa, kusanganisira zvinetsekana nezve post-kuzvimba hyperpigmentation, padivi kwenguva refu yekuzorora uye yekumashure-kurapwa kurapwa.